कति आवेदन पर्यो रैराङ हाइड्रोपावरको आईपीओमा ? - Dainikee News::
कति आवेदन पर्यो रैराङ हाइड्रोपावरको आईपीओमा ?
काठमाडौं, जेठ २ । वैशाख ३१ देखि विक्रीमा आएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको साधारण शेयर (आइपीओ) मा दोस्रो दिनसम्म ६ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
विक्री प्रबन्धक एनआईविएल एस क्यापिटलले मंगलबारसम्म ६४ हजार ८८ जना आवेदकबाट रू. ४७ लाख १२ हजार कित्ता शेयरको आवेदन माग भएको जानकारी दिएको छ ।
रैराङ हाइड्रोपावरले एकसय रुपैयाँ अंकित दरका ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको थियो । कम्पनीको ४ प्रतिशत शेयर ३३ हजार ६ सय कर्मचारीका लागि, ५ प्रतिशत ४२ हजार कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि र बाँकी ७ लाख ६४ हजार ४ सय कित्ता सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले आइपीओे निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ४ हजार २ सय कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बैशाख ३१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कम्पनीको आइपीओ बिक्री खुल्ला हुनेछ ।
यो जलविद्युत कम्पनीले गत जेठमा आयोजनास्थल प्रभावित स्थानीय पाँचथर र ताप्लेजुङवासीका लागि ५ करोड ६० लाख रुपैयाँको आइपीओ बिक्री गरेको थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दापछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन हुन लागेको हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ /Wednesday, May 16th, 2018, 8:37 pm